Laacibka Juventus Amauri Oo Laga Yaabo Inuu Bisha Janaayo Ku Biiro Kooxda AC Milan | WWW.DARARWEYNE.TK
Laacibka Juventus Amauri Oo Laga Yaabo Inuu Bisha Janaayo Ku Biiro Kooxda AC Milan
Wakiilka ciyaaryahanka kooxda Juventus Amauri ayaa sheegay inuu wadahadal la galay kooxda AC Milan intii uu furnaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, isla markaana laga yaabo inuu ku biiro bisha Janaayo.
31 jirkaasi ayaa dheeri waxa uu ku yahay ciyaartoyda looga baahan yahay Turin, waxaana dhawaan uu diiday inuu ku biiro kooxaha Fenerbahce iyo Marseille, isagoo doonaya inuu u dagaalamo boos uu ka helo kooxda Antonio Conte.
Si kastaba AC Milan ayaa laga yaabaa inay ganbaad ugu jirto ciyaaryahankii hor ee Palermo sida uu sheegay wakiil Ernesto Bronzetti.
“Aan u deyno arintaan ilaa bisha Janaayo, lakiin waxaana jiray wadahadal aan la yeelanay madaxweyne ku xigeenka Milan Adriano Galliani” ayuu u sheegay Odeon TV.
“Hadii waxyaabo yaryar ay saxmaan markaas Amauri waxa uu soo galayaa xiisahooda”
Ciyaaryahanka Brazil ka soo jeeda ayaa sheegay in sababo shaqsiyadeed darteed uu ugu sii negaaday garoonka Stadio Olimpico, lakiin Bronzetti ayaa sheegay inay u muuqato lacag darteed inuu ugu haray Juve.
“Marseille ayaa u soo bandhigtay dalab, lakiin muddo seddex xilli ciyaareed ah ayay doonayeen inay siiyaan 7 milyan euro. Xilli ciyaaredkan waxa uu Juve ka qaadanayaan 3.8 milyan euro. Waxaa xiiseynayay ciyaaryahanka sidoo kale Genoa, Palermo, Fiorentina iyo Parma, lakiin mushaharkiisa ma aysan awoodin”
“Amauri sidoo kale waxaa go’aankiisa uu ku joogayo Juve u sabab ah arimo qoyskiisa la xiriira” ayuu yiri.
Iyadoo ay aad u yar tahay fursad uu ku heli karo boos joogta ah madaama ay Juve joogaan weeraryahano badan, waxaa ay u badan tahay in bisha Janaayo uu Amauri ka qalab qaadan doono Bianconeri.
« David Luiz Oo Ka Hadlay Sida Uu Ugu Faraxsan Yahay Imaanshiyaha Raul Meireles Ee Chelsea
Tababaraha Kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson Oo Taageeray Dabeecadaha Mourinho »